Waxyaabaha: 2080, 20 mesh, 24 mesh, 30 mesh, 32 mesh, 60 mesh, 80 mesh, 180 mesh
Tilmaamaha mesh silig nikkel alloy u adkaysta heerkulka sare
Cr20Ni80, caabbinta heerkulka 1200 ℃, cr15ni60, heerkulka iska caabinta 1150 ℃, cr20ni35 iyo Cr20Ni30, heerkulka iska caabin 1100 ℃
Astaamaha mesh Ni Cr Alloy: waxay leedahay dheerayn sare, xoog cadaadis leh, dhamaystirka dusha sare, caabbinta oksaydhka, caabbinta baaruudda, xajinta iyo hawlaha kale. Waxay leedahay waqtiyo badan oo foorarsi soo noqnoqda, iska caabin xasilloon iyo isku xidhka heerkulka, culeyska dusha sare ee la oggol yahay, cufnaanta gaarka ah ee fudud iyo qiimo macquul ah.
Heerkulka ugu badan ee adeega ee mesh chromium alloy nikkel waa 900 ℃ – 1200 ℃.
Nikkel chromium alloy mesh darajooyin kale: cr15ni60, cr20ni35 iyo Cr20Ni30. Qaybaha ugu muhiimsan ee kiimikada waa nikkel iyo chromium. Waxay ka kooban tahay nikkel badan, sidaas darteed waxay leedahay iska caabin xoog leh. Waxay ka kooban tahay 20% chromium waxayna leedahay awood sare.
Mesh nickel: inta badan waxaa loo isticmaalaa baaritaanka iyo kala-soocidda gaaska, dareeraha iyo warbaahinta kale ee hoos yimaada xaaladaha deegaanka ee salka aashitada.
Habka tolida ee mesh nikkel: tidde cad iyo tolmo. Tilmaamaha mesh nikkel waa 1-400 mesh.
Waxyaabaha caadiga ah ee mesh nikkel: N4 N6 waxa ku jira nikkel oo ka sarreeya 99.5
Astaamaha mesh nikkel: nikkel waxa uu leeyahay xoog farsamo oo wanaagsan iyo ductility. Waxay adkaysi u leedahay biyaha waxayna leedahay iska caabin adag oo daxalka u leh aashitada iyo alkali. Barta dhalaalashadu waa 1455 darajo cufnaantana waa 8.902g/cm3. Mesh nikkel wuxuu leeyahay caag wanaagsan iyo iska caabin daxalka;
Codsiga mesh nikkel: waxaa inta badan loo isticmaalaa in batroolka, warshadaha kiimikada, fiber kiimikaad, samaynta wheel caag, metallurgy, daawada, cuntada iyo warshadaha kale. Siligga Nickel waxaa lagu toleeyey noocyo kala duwan oo mesh iyo maro ah, kaas oo leh aashito wanaagsan, alkali iyo waxyaabo kale. Sida wax soo saarka hydrogen electrolytic, sintering iyo gaashaanka ee qaybaha elektarooniga ah, waxay leedahay natiijooyin aad u wanaagsan.
Codsiga mesh daawaha nikkel
Kooxda horumarinta iyo cilmi-baarista ugu sareysa;
Fikradaha naqshadaynta sare;
20 sano oo waayo-aragnimo ah;
Qalabka wax-soo-saarka caadiga ah;
Maamulka tayada wax ku oolka leh
Alaabooyinka iyo adeegga gaarka ah;
Xalalka sifaynta lagu kalsoon yahay;
Adeegga gaarsiinta degdega ah;
Kharashka kaydinta dheeraadka ah;
Hore: 304/316 shaandhada shaandhada birta ah ee caadiga ah
Xiga: Hydrochloric acid u adkaysta Monel 400 aluminium mesh